Lego Marvel စူပါဟီးရိုးများ - Brick Fanatics
2008 ခုနှစ်တွင် Robert Downey Jr. သည် ထိုအချိန်က B-list စူပါဟီးရိုးတစ်ဦးအဖြစ် ငွေရောင်ပိတ်ကားကို ထွန်းညှိခဲ့သည်။ Iron Man သည် Box Office တွင် အလယ်အလတ် အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း၊art ၏ Marvel Cinematic Universe - စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်များကို ထာဝရပြောင်းလဲစေမည့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးချဉ်းကပ်မှု။ ဟိ Lego Group သည် လေးနှစ်အကြာတွင် Bandwagon ပေါ်သို့ ခုန်တက်ခဲ့ပြီး 2012 ခုနှစ်တွင် Avengers Assemble နှင့်အတူ အစုံလိုက်ဖွင့်ခဲ့သည်။
Joss Whedon ၏အဖွဲ့လိုက်ရုပ်ရှင်သည် ကနဦးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ Lego အဓိကအကြောင်း - Lego Marvel စူပါဟီးရိုးများ - လျင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဟိ Lego Marvel Super Heroes အပိုင်းသည် ယခုအခါ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်ပြသမိုင်းတစ်လျှောက်မှ မော်ဒယ်များနှင့် ရုပ်ပြအသေးစားများဖြင့် အစုံပေါင်း 200 ကျော်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
Lego Marvel သမိုင်း
Marvel စူပါဟီးရိုးများသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။ Lego အဖွဲ့ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ Marvel ရောင်းကုန်။ ကမ္ဘာကြီးကို တကယ်ထိမိခဲ့တယ်။ Marvel 2002 ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကပါ။ Spider-Man. Sam Raimi ၏ရုပ်ရှင် trilogy သည် tie-in sets အများအပြားကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီးစီးရီး၏ပထမနှင့်ဒုတိယရုပ်ရှင်များမှလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသည်။
အဆိုပါ 2012 Marvel သို့သော် အပိုင်းအခြားကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ Marvel စကြဝဠာ; အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသော ကမ္ဘာကြီးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ Marvel စတူဒီယိုများ ဖန်တီးနေပါသည်။ ရလဒ်သည် ကနဦးထက် ဇာတ်ကောင်များနှင့် ယာဉ်များစွာထံမှ လှုံ့ဆော်မှုရယူသည့် အပိုင်းအခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Spider-Man အပိုင်းအခြားဗျ။
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့၏ ပထမဆုံးသော ကျယ်ပြန့်မှုသို့ ထိုးဆင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ Marvel ဆောင်ပုဒ်သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဦးတည်ချက်ကို ယူဆောင်လာသည်။ သမားရိုးကျအစား Lego Hulk၊ Iron Man နှင့် Captain America တို့ကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် အက်ရှင်ရုပ် ၃ တွဲကို ပြသထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အဆိုပါပုံစံနှင့် ဆင်တူသည်။ Lego Group ရဲ့ Hero Factory အပိုင်းအခြားကို သက်သေပြမယ်ဆိုပြီး ခဏတာဘဲ။ 2011 New York Toy Fair နှင့် San Diego Comic-Con တို့သည် တက်ရောက်လာသူများအား ဆုများအဖြစ် ထုတ်ဝေသည့် သီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံလွှာများကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
Avengers tie-in sets အစုံသည် တစ်နှစ်တည်းတွင် ထွက်ရှိလာပြီး အမျိုးအစားများစွာကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ Marvel ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပရိသတ်အတွက် သေးငယ်သောရုပ်ပုံများ။ MCU သည် အဓိက လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေချိန်ဖြစ်သည်။ Marvel အစုံ၊ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ ဂartOons က Ultimate နဲ့တူတယ်။ Spider-Man နှင့် Avengers Assemble သည် မကြာမီ နောက်ထပ်အတွဲများကို မှုတ်သွင်းခဲ့ပြီး အကြိုက်များကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ Spider-Man မျိုးဆက်သစ် ပရိသတ်များအတွက်။ X-Men ကဲ့သို့သော အခြားပရိသတ်အကြိုက်များသည် ၎င်းတို့စိတ်ကူးထားသောရုပ်ရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ ကြိုကြားကြိုကြားပြသမှုများလည်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Lego Marvel Avengers Assemble ကို ထွက်ရှိပြီးနောက် နှစ်အတော်ကြာအောင် အလားတူ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်သွားပါမည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ၎င်းသည် အစောပိုင်းကာလအချို့အတွက် အစုံလိုက်များကို ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ Marvel လွဲချော်ခဲ့သောရုပ်ရှင်များ။ နှင့်အတူ Marvel Cinematic Universe ကို အပြည့်အ၀ လွှဲထားပြီး၊ အသစ်များကို မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။ Marvel စူပါဟီးရိုးများသည် လာမည့်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွက် အစုံဖြစ်သည်။
Lego Marvel အစုံ
Marvel Lego အစုံလိုက်တွေက နေရာအနှံ့က ပရိသတ်တွေကို လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ Lego အဖွဲ့၏အသက်အပိုင်းအခြား။ အများအပြားသည် ငယ်ရွယ်သော ပရိသတ်ကို ပြတ်သားစွာ ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း အကွာအဝေးသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ စျေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်မှု အနည်းငယ် ပြုလုပ်ထားသည်။
အမြဲပြောင်းလဲနေသော သဘောသဘာဝ Marvel ရုပ်ရှင်များ – ဇာတ်ကောင်အသစ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်များနှင့် နေရာဒေသများ ပုံမှန်ပေါ်လာသည် – ကျွန်ုပ်တို့အား မော်ဒယ်အမျိုးမျိုး၏ ရွေးချယ်မှုကို ပေးထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချို့က အနည်းငယ် ပို၍ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ Quinjet နှင့် Milano ကဲ့သို့သော အထင်ကရယာဉ်များသည် နှစ်များအတွင်း ဗားရှင်းများစွာကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး Tony Stark သည် Hulkbusters နှင့် အလားတူမော်ဒယ်များ၏ စစ်မှန်သောလက်နက်များပါရှိသည်။
သို့သော် တည်ငြိမ်သော အရှိန်အဟုန် Marvel ရုပ်ရှင်များသည် ပြင်ပမှ တွေးခေါ်မှုအချို့ကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တိုင်းလိုလို Marvel Avengers Assemble သည် အနည်းဆုံး ကြိုးတန်းတွဲတစ်ခု ရရှိပြီးကတည်းက ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို့အား လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ရုပ်ရှင်များနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် အစုံများစွာကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ 79060 Doctor Strange ၏ Sanctum Sanctorum သည် တိုက်ပွဲအတွက် တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကို ပံ့ပိုးပေးထားပြီး 76039 Ant-Man Final Battle သည် အနည်းငယ်ပို၍ meta ဖြစ်၍ ကြီးမားသော၊ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Lego ကစားရန်ဒြပ်စင်များ။
အစွန်းဆုံးမှာ Marvel အသက်အပိုင်းအခြား၊ 76052 SHIELD Helicarrier သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ စုဆောင်းမှုများ၏ သရဖူရတနာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ကြီးမားသော မော်ဒယ်၊ အသေးစိတ်အချက်အလတ်များကို အာရုံစိုက်ကာ မော်တာဘိုင်များကို ခမ်းနားထည်ဝါသော ပြသကွက်တစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ စကေး၏အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Mighty Micros – cartတွဲပါယာဉ်များပါရှိသော အစွန်းအထင်းသေးသေးသေးသေးလေးများ - ငယ်ရွယ်သူ လူငယ်များအတွက် စံပြဝင်ပေါက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ။art.
Lego Marvel သေးသေးလေး
အခုချိန်ထိ ပရိသတ်တွေအတွက် အကြီးမားဆုံး သရေပွဲပါ။ Marvel စူပါဟီးရိုးများအကွာအဝေးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား များစွာပေးထားသည်။ Marvel Lego minifigures. စတင်ရောင်းချချိန်တွင် Lego ပရိတ်သတ်များသည် Avengers ၏အဓိကဇာတ်ဆောင်အသေးစားများအပြင် အခြားသောအကြိုက်များဖြစ်သည့် Spider-Man နှင့် Wolverine
ဆက်လက်၍ လွှတ်ပေးခြင်း၊ Marvel ရုပ်ရှင်တွေက အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ Lego ပရိသတ်များသည် ၎င်းတို့၏ စူပါဟီးရိုး စုဆောင်းမှုများကို လျင်မြန်စွာ ချဲ့ထွင်ကာ အချို့သော ဇာတ်ကောင်များ၏ ဗားရှင်းကွဲပြားသည်။ Tony Stark ၏ အဆက်မပြတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော ဝတ်စုံများအတွက် များစွာ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ Lego ပရိသတ်များနှင့်အတူ, စုဆောင်း 76125 သံက Man သံမဏိခန်းမ စံပြပြကွက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်။ သို့သော် ဤတွင် သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်။ Spider-Man ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်နေသောဗားရှင်းများအပြင် Spider-family ၏အခြားအဖွဲ့ဝင်များစွာကိုလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်လက်ခံစားသွားပါမည်။
အဓွန့်ရှည်ဆုံးသော အမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။ Lego Marvel Minifigures များသည် ဇာတ်ကောင် ဒီဇိုင်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Avengers Assemble သည် ကြိုးဝိုင်းအစုံများသည် Hulk အတွက် ကြီးမားသောပုံအသစ်တစ်ခုကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပုစဉ် Lego Group သည် ယခင်က (Rock Raiders နှင့် The Lord of the Rings ကဲ့သို့သော အပိုင်းများတွင်) သင်္ဘောသီးပုံကြီးများကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပြီး Hulk ဗားရှင်းသည် ပို၍ လူသားဆန်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် ၎င်းကိုကျော်လွန်၍ အခြားပိုကြီးသောကိန်းဂဏန်းများအတွက် အသုံးဝင်သောပုံစံတစ်ခုကို သက်သေပြခဲ့သည်။ Marvel အပိုင်းအခြားများ၊ DC ရုပ်ပြစူပါဟီးရိုးများနှင့် Ninjago.
အခြားသော တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် Giant-Man ရုပ်ထွက်ကို တောင်းဆိုသည့် 76051 Super Hero Airport Battle ကဲ့သို့သော အစုံလိုက်များဖြစ်သည်။ ရလဒ်မှာ ပိုကြီးသော အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး ကြမ်းတမ်းသောအသေးစားအချိုးအစားများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် - အခြားနေရာများတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ Mighty Micros အသေးစားရုပ်ပုံများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရွေ့အပြောင်းဖြစ်နိုင်သည် ။ Mighty Micros စုဆောင်းမှု မရောက်လာမီ Lego minifigures ၎င်းတို့သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ဇာတ်ဝင်ကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ညီညွတ်သောအမြင်ဟန်ပုံစံကို ဖန်တီးထားသည်။ Mighty Micros သည် ပိုမိုချဲ့ကားသော မျက်နှာအမူအရာနှင့် ပိုမိုရိုးရှင်းသော ကိုယ်လုံးပုံခြင်းတို့ကို ဦးစားပေး၍ ၎င်းကို ပြတင်းပေါက်မှ ပစ်ချခဲ့သည်။ လူတိုင်း၏ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် မလိုအပ်သော်လည်း၊ ဤအသေးစားရုပ်ပုံများသည် သေချာပေါက် ထူးခြားပြီး ကလေးများအတွက် ၎င်းတို့၏ နှစ်သက်ရာဇာတ်ကောင်အချို့ကို ရယူရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ပေးထားသည်။
သီးနှံသစ် Disney+ Marvel ရှိုးပွဲတွေမှာ ရည်စူးပြီး လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ Marvel စတူဒီယို စုဆောင်းထားသောအသေးစား အတိုင်းအတာ - ပထမတစ်ခု Marvel. Wandavision၊ Loki၊ Falcon နှင့် Winter Soldier နှင့် What If…?၊ ဤအရာများသည် မကြုံစဖူးအသေးစိတ်နှင့် ဒြပ်စင်အသစ်အချို့ကိုပင် ပေးစွမ်းနေသည်— အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရှားပါးသည်။ Marvel minifigures ပိုကျယ်ပြန့်သည်။
ပေးထား Marvel's popularity,aလှူပါ။ Lego Marvel ဂိမ်းက သိသာထင်ရှားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် Lego Star Wars- ဗီဒီယိုဂိမ်းသည် ခိုင်မာသောပုံစံတစ်ခုကို ဖန်တီးထားသည်။ Lego ဂိမ်းများ။ ဟာသမြောက်တဲ့ ချဉ်းကပ်နည်းတွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ classic IP၊ ပဟေဠိပလက်ဖောင်းဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် အချိန်မကုန်ဘဲ အဝင်/ထွက်ပါ။ Lego ဗေဒ။ ထို့ကြောင့် Indiana Jones၊ Pirates of the Caribbean နှင့် The Lord of the Rings တို့မှ မှုတ်သွင်းထားသော ဂိမ်းများ အားလုံး နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာသည်။
ဤပုံစံခွက်အတွင်းပင်၊ 2013 ခုနှစ်များ Lego Marvel စူပါဟီးရိုးများကို ထုတ်ဝေပြီးနောက် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Avengers ဇာတ်ကားမှ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအချို့ကို ဆွဲထုတ်ခဲ့သည် (Phil Coulson နှင့် shawarma နှစ်ခုစလုံးသည် ထင်ရှားသည်) ဖြစ်သော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် ၎င်းသည် အရာအားလုံးကို ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ Marvel - ရုပ်ပြ၊ ဂartအွန်းများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် အခြားအရာများ။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်း၏ဇာတ်လမ်းသည် Avengers၊ X-Men နှင့် Fantastic Four ကဲ့သို့သော သူရဲကောင်းများနှင့်အတူ Kraven the Hunter နှင့် Beta Ray Bill တို့ကဲ့သို့ မထင်မရှားဇာတ်ကောင်များလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Lego Marvel အရင်တုံးက အုတ်မြစ်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စူပါဟီးရိုးတွေ Lego အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဂိမ်းများ။ ဂိမ်းဆော့တုန်း Lego Batman 2: DC စူပါဟီးရိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပေးတယ်။ city စူးစမ်းဖို့၊ Lego Marvel စူပါဟီးရိုးများသည် ၎င်းအား ၎င်း၏ယခင်ကထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်စရာများနှင့် ကွဲပြားမှုများဖြင့် ဖြည့်သွင်းခဲ့သည်။ မျဉ်းတန်းအဆင့်များသည်လည်း ပြီးမြောက်သွားခဲ့သည်။ ကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးတွင် ကစားသမားများသည် စွမ်းရည်များကို အသုံးချနိုင်သည်။ Marvelခလုတ်များကိုဖွင့်ရန်၊ နံရံများကိုဆွဲထုတ်ပြီး ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန် သူရဲကောင်းများ။
Lego Marvel Super Heroes2ကဲ့သို့ပင် ၎င်း၏ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းများကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ Marvel ရုပ်ရှင်များသည် ၎င်း၏ ဇာတ်ကောင်စာရင်းကို ပို၍ ပြတ်သားစွာပုံဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Kang the Conqueror သည် ဗီလိန်အဖြစ် အချိန်ကုန်ခံကာ၊ Lego Marvel ၂ ခု ပေါင်းပြီး မျိုးစုံ ပစ်တယ်။ Marvel ကမ္ဘာနှင့် ခေတ်များကို ဒေသတစ်ခုတည်းတွင် ကစားသူများသည် စူးစမ်းလေ့လာရန် open-world ကဏ္ဍရှိ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်စရာများနှင့်အတူ ပထမခေါင်းစဉ်၏ အုတ်ခဲကွဲကွဲ၊ ပဟေဠိဖြေရှင်းသည့်ဂိမ်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အတိအကျပြန်မရေးထားပေမယ့် Lego နည်းဥပဒေစာအုပ်၊ ၎င်းသည် ခေတ်အဆက်ဆက် လူကြိုက်များသော ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနှင့် ရွှေတွင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ Marvel nerd။
ဂိမ်းဝါသနာရှင်များအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်၊ Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ2နှင့် Lego Marvel's Avengers များကို စုဆောင်းခဲ့သည်။ Lego Marvel ကွန်ဆိုးလ်များနှင့် PC အတွက် စုစည်းမှု။
အလိုလျှင် Lego Marvel Super Heroes ဂိမ်းများသည် အရာအားလုံးကို ပစ်ချခဲ့သည်။ Marvel ရောနှော၊ Lego MarvelAvengers သည် ပို၍ ပိုင်းခြားသည်။ အရင်နဲ့မတူဘူး။ Lego Marvel ဂိမ်း၊ ဤခေါင်းစဉ်သည် ၎င်းတို့အား စိတ်အားထက်သန်သော ရုပ်ပြများအစား MCU မှ ပြတ်သားစွာဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် စစ်မှန်သော lick ထပ်လောင်းမှုအတွက် ရုပ်ရှင်များမှ မှတ်တမ်းအသံဖိုင်ကိုပင် ပြသထားသည်။city.
Lego Marvel's Avengers သည် ကစားသမားများအား အရေးပါသော အခိုက်အတန့်များသို့ ခုန်ဆင်းရန် အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။ MarvelAvengers ရဟတ်ယာဉ် တိုက်ခိုက်မှု နှင့် Age of Ultron ၏ အဝေးပြေး ပြေးလမ်း ကဲ့သို့သော ရုပ်ရှင်များ။ ၎င်းသည် ဇာတ်ကောင်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်မှုများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို တုန်လှုပ်စေပါသည်။ ကစားနိုင်သောဇာတ်ကောင် 100+ ထဲမှ နှစ်ခုသည် ရန်သူများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာအနိုင်ယူရန် ပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားမှုကို ဆွဲထုတ်နိုင်သည်။ အရင်လိုပဲ Lego ဂိမ်းများ၊ ၎င်းသည် အခမဲ့ကစားခြင်းကိုလည်း လုံလောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည် - ၎င်းကိုဝင်ရောက်ရန် မှန်ကန်သောဇာတ်ကောင်လော့ခ်မဖွင့်မချင်း အဆင့်အပိုင်းများကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။
ပွင့်လင်းကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ကို အရင်ကတည်းက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါ။ Lego ဂိမ်းများ (အပြင် Squirrel Girl နှင့် Fin Fang Foom ကဲ့သို့ အမိုက်စားဇာတ်ကောင်များ)၊ Lego Marvel's Avengers သည် နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ခိုင်မာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego နှင့် Marvel ပရိသတ်များ ၎င်းနှင့်အတူ အတွဲလိုက် ပေါ်လာသည်။ Lego Marvel စူပါဟီးရိုးများ ခေါင်းစဉ်များကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Lego Marvel PC နှင့် consoles များတွင် စုစည်းမှု။
၎င်းသည် အထင်ရှားဆုံး ပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Marvel Cinematic Universe နှင့် အရာအားလုံး Marvel ရုပ်ရှင်များသည် နောက်ဆုံးတွင် (တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း) လှည့်ပတ်နေလိမ့်မည်။ Infinity Gauntlet သည် စကြဝဠာကို သူနှစ်သက်သလို ပြန်လည်ပုံဖော်ရန်အတွက် Thanos မှ နာမည်ကြီးသည်။ အဖြစ် Lego အဖွဲ့သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် ရည်ရွယ်သည့် အစုံအလင်ကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန် အသွင်ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ Lego Infinity Gauntlet သည် သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
2021 တွင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး 600 နီးပါး၊ ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet အလားတူ ထုတ်ကုန်များကို လိုက်နာခဲ့သည်။ Star Wars ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း။ ၎င်းသည် ကစားခြင်းထက် ဖန်သားပြင်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး gauntlet သည် ၎င်း၏ stand နှင့် အရှည် 30cm ခန့်ရှိသည်။ ဖန်သားပြင်ပုံစံနှင့် လိုက်ဖက်သည့် အနေဖြင့်၊ gauntlet သည် ဒရမ်-ယွန်းထည်ရွှေဒြပ်စင် အများအပြားကိုလည်း အသုံးပြုထားပြီး၊ ယခင်က အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Monkie Kid ဆောင်ပုဒ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနည်းနည်းက မေးခွန်းထုတ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ gauntlet ၏လက်ချောင်းများအားလုံးသည် အပြည့်အဝဖြစ်နိုင်သည်၊ ခွင့်ပြုသည်။ Marvel နာမည်ကြီး 'လျှပ်တစ်ပြက်' ကို ပြန်လည်ဖန်တီးရန် ပရိသတ်များ (အစစ်အမှန်အရာထက် ပိုလုံခြုံသည်ရှိသော်ငြား)။ ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet Venom နှင့် Carnage တို့၏ အကွဲအပြဲများ ၊ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသော symbiotes များနှင့် ထိုနှစ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ Spider-Man ရန်သူများ။ အထင်ကရပုံတွေ များများရိုက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Marvel အရာဝတ္ထုတွေက မဝေးပါဘူး။
Lego Marvel နေ့စဉ်အမှား
နေရာဒေသအားလုံး၏ Marvel ရုပ်ပြများ၊ Daily Bugle ရုံးများသည် လူသိအများဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Peter Parker ၏ မကြာခဏ အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော J. Jonah Jameson မှ သတင်းစာအား သံလက်သီးဖြင့် အုပ်စိုးထားသည်။ Spider-Manခံနိုင်ရည်အရှိဆုံး နှောင့်ယှက်သူများ။
အဆိုပါ Lego Group သည် 76005 ခုနှစ်တွင် J. Jonah Jameson minifigure နှင့်အတူ Daily Bugle (2013 Daily Bugle Showdown) ကို အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Marvel အကွာအဝေးတွင် ရေပန်းစားလာကာ ပိုမိုရည်မှန်းချက်ကြီးသော မော်ဒယ်ကို ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်သည် 2021 ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ 76178 နေ့စဉ် Bugleနက်နဲသော ငုပ်လျှိုးရန် အချိန်ယူသည်။ Marvel စကွဝဠာ။
Daily Bugle ကဲ့သို့သော မော်ဒယ်များသည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ Marvel ပရိသတ်များ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်များသည် ကစားခြင်းနှင့် ပြသမှုတန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးကို မျှတစေသည့် ပိုကြီးသောအသေးစိတ်ပုံစံများကို ရရှိစေသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအသက်အပိုင်းအခြားသည်စျေးသက်သာသောအစုံများတွင်နေရာရှာရန်ခက်ခဲသောပိုမိုထူးခြားသောဇာတ်ကောင်များကိုကူညီနိုင်သည်။
Daily Bugle သည် ဤအကွက်များအားလုံးကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး အခြားအရာများ။ ၎င်း၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းသို့ မကြုံစဖူးစကေးခံစားမှုကို ယူဆောင်လာကာ မော်ဒယ်သည် အသေးစိတ်အစိပ်အပိုင်းများကို ပေးဆောင်သည်။ Marvelနယူးယောက်၊ ရုံးများ၊ သတင်းစာတိုက်များနှင့် classic ပိတောက်ဝါ။ လင်းယုန်မျက်စိ Marvel အဆောက်အအုံသည် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သော ရုပ်ပြနှင့် ရုပ်ရှင်များအကြောင်း အများအပြားကို ပရိသတ်များ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ Blade၊ Daredevil နှင့် The Punisher တို့၏ ပွဲဦးထွက်ပွဲများအပါအဝင် အလွန်ကောင်းမွန်သော သေးငယ်သောရုပ်ပုံ 25 ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
၎င်း၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်အတွက် ပိုမိုရှင်းလင်းသော ညွှန်ပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့် Daily Bugle အသစ်သည် လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Lego's Modular အဆောက်အဦများစုစည်းမှု။ အဘို့ Marvel ပရိတ်သတ်များသည် နည်းနည်းပို၍ ဆန်းပြားမှုကို လိုချင်ကြသည်၊ Daily Bugle သည် စံပြစံတစ်ခုဖြစ်သည်။arting point ။
Lego Marvel Black ကသောကြာနေ့
Black ကသောကြာနေ့ တစ်နှစ်တာ၏ အမျှော်လင့်ဆုံး စျေးဝယ်နေ့များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဘို့ Lego ပရိသတ်တွေနဲ့တော့ မတူပါဘူး။ Black ကသောကြာနေ့ 2021 တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှော့စျေးများစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။ Marvel အစုံ။
စျေးနှုန်းလျှော့ချမှုအတွက် သိသာထင်ရှားသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် အငြိမ်းစားယူခြင်း အစုံဖြစ်သည်။ အဲဒီအထဲမှာ ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ အယောက် ၂၀ ချန်ထားတယ်။ 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး နှင့် 76174 Spider-ManMonster Truck နှင့် Mysterio သည်းခံစောင့်နိုင်ရင်၊ Black ကသောကြာနေ့ ဒါတွေကို ရောင်းထုတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။
အရောင်းမထွက်သေးရင်တောင် Lego အဖွဲ့၏ လက်ရှိသီးနှံအစုံသည် ကြည့်ရှုရကျိုးနပ်သည်။ ပရိုမိုးရှင်းအစုံများသည် ထပ်တလဲလဲ p ဖြစ်လာသည်။art of Black ကသောကြာနေ့၊ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ စျေးကြီးတဲ့ set နှစ်ခုလုံးက အဲဒီပစ်မှတ်တွေကို ထိဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အကြီးမားဆုံးမော်ဒယ်များထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့် Marvel အကွာအဝေး, 76178 နေ့စဉ် Bugle ပရိုမိုရှင်းမော်ဒယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက် ဘေးကင်းသော အလောင်းအစားဖြစ်သည်။ အဲဒါက မင်းရဲ့ ဆန်းပြားမှုကို မယူဘူးဆိုရင်၊ ရွေးချယ်ဖို့ စျေးသက်သာတဲ့ အစုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ 76171 Miles Morales Mech Armor သည် ပရိသတ်အနှစ်သက်ဆုံး Miles Morales မှ ရှားပါးသောအသွင်အပြင်ကို ပြသထားပြီး၊ 76173 Spider-Man နှင့် Carnage vs. Ghost Rider သင်၏စုဆောင်းမှုအတွက် Ghost Rider အသစ်တစ်ခုပါရှိသည်။
Infinity Saga အသစ် နဲ့ ဘာဖြစ်လဲ...? သင်ပျော်နေတယ်ဆိုရင် sets တွေက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Marvelအချိန်အတန်ကြာအောင် ထွက်လာတယ်။ ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem 76201 Captain C သည် မူရင်း Iron Man ဇာတ်ကားအတွက် ပထမဆုံး ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။arter နှင့် Hydra Stomper သည် alternate-universe shenanigans အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အရသာက ပိုစျေးကြီးရင် ထွက်ကြည့်စမ်း 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော - Infinity War's Benatar ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်။
သင်စိတ်ဝင်စားသမျှ၊ 2021 ခုနှစ် Black ကသောကြာနေ့ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည်။ ဟိ Lego အဖွဲ့မှလည်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ VIP ပိတ်ရက် နိုဝင်ဘာ ၂၀-၂၁ အတွက်။ ယခုနှစ်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှိပ်ပါ။ VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အဖြစ်အပျက်များ၊ နှင့် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ထွက်စစ်ဆေးရန် Marvel- အထူး Black ကသောကြာနေ့ အပေးအယူ။